Hot Melt Adhesive Firimu Vagadziri uye Vatengesi - China Hot Melt Adhesive Firimu Fekitori
Kupisa kunyauka kunamatira firimu yeinsole
Iyo TPU inopisa inyauka inonamira firimu inoenderana nekubatana kwePV, chakagadzirwa nedehwe, jira, faibha uye zvimwe zvinhu zvinoda kudzikira kwakadzika. Kazhinji inoshandiswa kugadzira PU foam insole inova inochengetedza zvakatipoteredza uye haina chepfu. Zvichienzaniswa nemvura guruu bonding, th ...
Iyo inodziya PU fusion firimu ine translucent chitarisiko icho chinowanzo shandiswa pakubatana kweganda nemucheka, uye munda weshangu zvinhu zvinoshandiswa, kunyanya kubatana kweOssole insoles uye Hypoli insoles. Vamwe vanogadzira insole vanosarudza kudzikira kwekunyungudika, nepo vamwe vasati ...
Iyo inochinja-chinja thermal polyurethane fusion sheet iyo inokodzera kubatanidza ye super fiber, dehwe, jira rekotoni, girazi fiber bhodhi, nezvimwewo Sokunze zvipfeko placket / zipi / homwe chivharo / ngowani-yekuwedzera / yakashongedzwa chiratidzo. Iyo ine yakakosha bepa iyo inogona kuita kuti zvive nyore kuwana iyo ...
Ichi chigadzirwa ndechemhando yeTPU system. Iyo modhi yakave yakagadziridzwa kwemakore mazhinji kusangana nechikumbiro chevatengi chekusimba uye zvemvura-chiratidzo maficha. Pakupedzisira inoenda kune yakakura mamiriro. inoenderana nenzvimbo dzinoumbwa nezvipfeko zvemukati zvisina musono, bras, masokisi uye micheka yakasununguka ine ...
EVA inopisa yakanyunguduka inonamira firimu haina hwema, isina kunaka uye isiri-chepfu. Iko kune yakaderera-kusungunuka polymer iyo ethylene-vinyl acetate copolymer. Ruvara rwayo rwakajeka chena kana chena hupfu kana granular. Nekuda kweiyo yakadzika crystallinity, yakakwira elasticity, uye yerabha-yakafanana chimiro, ine yakakwana polyethyle ...
EVA inopisa inyauka inonamira padandemutande firimu
W042 chena pajira riya chitarisiko guruu jira riri EVA zvinhu zvinhu hurongwa. Neichi chitarisiko chikuru uye chakakosha chimiro, ichi chigadzirwa chinozvibata kufema kukuru. Kune iyi modhi, ine akawanda mashandisirwo ayo anotenderwa zvakanyanya nevatengi vazhinji. Izvo zvakakodzera kubatanidzwa kwe ...
PA inopisa inyauka inonamira firimu chinhu chinopisa chinonyunguduka chinonamira firimu chigadzirwa chakagadzirwa ne polyamide seicho chikuru mbishi zvinhu. Polyamide (PA) ndeye yakasarudzika thermoplastic polymer nekudzokorora zviyero zveboka reamide pane iyo molekyoni musana inogadzirwa ne carboxylic acids uye amines. Maatomu ehydrogen pane t ...
HD371B inogadzirwa neTPU zvinhu neimwe shanduko uye fomular. Inowanzo shandiswa isinga pinde mvura-nhatu-bhanhire, zvipfeko zvemukati zvisina musono, muhomwe isina musono, isina zipi isina mvura, tambo isina mvura, isina musono zvinhu, zvipfeko zvinoshanda zvakawanda, zvinhu zvekuratidzira uye mamwe minda. The hwoupenyu Pr ...
L043 chigadzirwa cheEVA chinoenderana nekukwirirwa kwemicrofiber uye EVA zvidimbu, machira, bepa, nezvimwe. Zvakasarudzwa nevaya vanoda kuyera temprature yekugadzirisa uye higer temprature kuramba. Iyi modhi inonyanya kugadzirirwa kune rimwe rakakosha jira seOxford clo ...
HA490 chigadzirwa chePolyolefin. Zvakare iyi modhi inogona kutsanangurwa seEAA. Iyo firimu inochinja ine bepa rakaburitswa. Kazhinji vanhu vanoshandisa hupamhi hwe48cm uye 50cm neukobvu 100 micron pafiriji. HA490 inokodzera kubatanidza machira akasiyana siyana uye simbi zvinhu, kunyanya ...
PO inopisa inyauka inonamira firimu yefriji evaporator
Iyo yakagadziriswa polyolefin inopisa inyauka firimu isina rakakosha bepa. Kune vamwe vatengi 'chikumbiro uye hunyanzvi musiyano, inopisa inyauka firimu isina bepa rakaburitswa zvakare chigadzirwa chinogamuchirwa mumusika. Iyi tsananguro inowanzo rongedzwa pa200m / roll uye izere nefirimu firimu nepepa chubhu dia 7.6cm. ...
HD112 inogadzirwa ne polyester. Iyi modhi inogona kugadzirwa nepepa kana isina bepa. Kazhinji inowanzo shandiswa pakushongedza aluminium chubhu kana pani. Isu tinoigadzira yakajairwa hupamhi hwe1m, imwe upamhi inofanirwa kuve yakagadzirirwa. Kune akawanda mafomu ekushandisa eichi chirevo. HD112 inoshandiswa ...